Eoropa tsara indrindra Restaurant Guide Michelin | Save A Train
an-trano > Travel Europe > Eoropa tsara indrindra Restaurant Guide Michelin
(Last Nohavaozina: 18/03/2022)
Ny tsara indrindra fisakafoanana Michelin Eoropeana lehibe mpitari-dalana manome voalohany ka mikasa ny lamasinina nankany manodidina Eoropa. Ny mpitari-dalana izao Michelin tolotra Eoropa mpandeha fantina trano fisakafoanana sy hotely in 38 Eoropa tanàna. Tanàna vaovao telo no nanampy ity 2019 fanontana: Zagreb sy Dubrovnik, Kroasia, ary Reykjavik, Islandy. Anonymous nampiofana mpanara-maso mba hitsidika sy mifidy trano fisakafoanana raha mampihatra ny malaza Sakafo Michelin kintana-Rating rafitra ary mampiasa dingana toy izany koa ho an'ny Hotels. Ny vokany: ny soso-kevitra isan-karazany ho an'ny orinasa sy ny teti-bola rehetra tiany.
Araka ny bilaogin'ny trano fisakafoanana Fine Dining Lovers. Mihazakazaka ny rahavavy sy rahalahy sy Mauro ekipa Catia Uliassi, ny trano fisakafoanana mametraka mavesatra mifantoka amin'ny hazan-dranomasina, ary manome sady Menio azo andramana sy la Carte fisakafoana. Uliassi ankehitriny sivy hafa iray amin'ireo telo-kintana Restaurants in Italia. Midika izany fa tamin'ny taona lasa rehetra ny telo-kintana toerana hatrany ny toe-, anisan'izany ny trano fisakafoanana Modena malaza Osteria Francescana.
Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Guide Michelin: Great Britain
Ity taona ity, ny tsara indrindra ao Eoropa trano fisakafoanana Grande-Bretagne mbola tsy iharan'ny amin'ny trano fisakafoanana dimy mianatra izy ireo nahavita hitana ny kintana. Cue nisento Fikambanana! Ny Araki, Restaurant Gordon Ramsay sy Alain Ducasse amin'ny Dorchester no London orinasa mba hihazona eny an-tanana aminy, toa an'i Heston Blumenthal Gana ny Fat sy ny akaiky rano Alain Roux Inn, na in Bray.
Maro ireo fiarandalamby nankany London amin'ny fotoana samihafa manerana an'i Eoropa. Head ny SaveATrain hamandrihana tapakila ao anatin'ny minitra hijerena ny grub tsara indrindra!
Holandy (na Holland) dia firenena kely ary feno sary masina malaza eran-tany. Beautiful jiro saha, Windmills, fromazy tsena, hazo shoes, Lakandranon'i Amsterdam, Masterpieces of Old Masters, Delft Blue tanimanga, zava-baovao rano-fitantanana, ary an-tapitrisany bisikileta. Ary misaotra soa ho an'ny bisikileta. ny 2019 MICHELIN Guide ho an'ny Netherlands dia manana 571 toeram-pisakafoanana sy ny 263 Hotels. Ianao handeha mila ny workout.
Misy ankehitriny 89 misy kintana iray-tsara indrindra any tanteraka. Amin'ny Derozario in Helmond, Jermain Rozario De mametraka ny kofehy ireny amin'ny Indoneziana nahandro. amin'ny mpanjaka trano fisakafoanana Tilburg, Paul Kappe mitaona sy fisakafoana hariva ny maoderina nahandro miaraka amin'ny fatratra tsirony, tahaka Jeroen Brouwer amin'ny ny Loohoeve in Schoonloo sy Thomas Van Santvoort amin'ny ankizivavy in Kerkdriel. Ny hamafin'ny ny tsirony koa inona no mampiavaka ny inventiveness Naparitaka nataon'i Jim sy Mike Cornelissen amin'ny Rijnzicht in Doornenburg, ary izany no sakafo ny vilia ny nateriny OONIVOO uden. Fa tia ny tsara sakafo ao lafo vidy manodidina azy, Bougainville in Amsterdam, SY Voltaire in Leersum dia tanteraka musts.
Madrid manana manodidina 3,100 trano fisakafoanana, fa vitsivitsy no nahazo kintana ny malaza Guide Michelin. Misy 16 Restaurants in Madrid omena amin'ny Michelin kintana: DiverXO (kintana telo); Santceloni, La Terraza do Casino, Sergi Arola, Ramon Freixa Madrid sy El Club Allard (kintana roa); ary Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Goat sy Punto MX (kintana iray). Ankoatry ny, eny ivelan'ny tanàna, trano fisakafoanana iray (akorandriaka) manana kintana roa ary misy kintana telo-trano fisakafoanana iray: Casa Jose, Chiron, sy Montia. Rehetra ireo manompo izao tontolo izao-kilasy ny sakafo sy ny asa fanompoana tsara dia tsara manolotra.
Ny zavaboary ny Chef David Muñoz maneran-tany no nampiaiky volana gourmets. Coolness, herim-po, ary ny famoronana no lakilen'ny fahombiazan'ny DiverXO. Ity trano fisakafoanana ny sakafo miova ny vanim-potoana, fa ny manana fahafaha roa. Ny XOW Menu sy ny Menu Glotón XOW. Samy manome sakafo mitovy ireo menus ireo ary tsy mitovy afa-tsy ny habetsany sy ny vidiny.
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay ao amin'ny tranokalanao ve ianao, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Michelin	#michelinstar	#thenetherlands	Sakafo	travelengland	travelholland	travelitaly	travelnetherlands	travelspain
Train Travel, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Spain, Travel Europe